Beeline ịgba ígwè navigation ngwaọrụ nyochaa: nchegbu-free fun maka nchọpụta - News Ọchịchị
Beeline ịgba ígwè navigation ngwaọrụ nyochaa: nchegbu-free fun maka nchọpụta
O doro anya na e nwere ihe a ọdịiche nke na-abụghị GPS chụpụrụ nsochi usoro ebe ngagharị na mmata nke dị mkpa karịa ihe ndị kasị oru oma ụzọ.
Isiokwu a na-akpọ “Beeline ịgba ígwè navigation ngwaọrụ nyochaa: nchegbu-free fun maka nchọpụta” e dere site Alastair Jardine, n'ihi na theguardian.com on Wednesday 25 November 2015 09.52 UTC
Nke a nyochaa E duziri na n'oge na-ogbo prototype nke Beeline, kwadoro site na ihe arduino osisi. The ikpeazụ ngwaike na ngwa n'ihi na ụgbọ mmiri na August 2016 ga-ele anya dị iche iche.
The Beeline bụ a okirikiri navigation ngwaọrụ na dumps gị na mbụ n'aka-site-n'aka ntụziaka maka akụ na mgbe nile na-ezo ị na ziri ezi.
Ulo oru dị ka a Kickstarter mgbasa ozi, Beeline bụghị a n'aka-site-n'aka GPS ngwaọrụ ka i ga-na ụgbọ ala, kama ọ na-nanị na-egosi na ntụziaka nke gị njedebe ikpeazụ. Ọ na-enye gi ohere iji ruo ebe ahụ eji gị nouse. Ya creators na-akpọ ya "ajị ajị navigation".
The Beeline prototype, kwadoro site na ihe Arduino na jikọọ na Android ekwentị. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The echiche dị mfe. The Beeline eji gị ama na-eme ọtụtụ ndị dị arọ na-ebuli: ị ikwunye gị njedebe ikpeazụ n'ime ngwa, na ntụziaka na anya na-mgbe ahụ gosiri na Beeline ngwaọrụ kere gị handlebars.
The ikpeazụ ngwa ga-akwado waypoints, ikwe ọzọ mgbanwe nsochi usoro via ọkacha mmasị gị ahịa kọfị. The ngwa M wee nye a atụ ogho nwere ike na-ezo m na ntụziaka nke a otu ebe.
Fun na-erughị nrụgide karịa atụgharị-site-n'aka
The akụ ihe na ntụziaka nke ị na-aga. Bọtịnụ gburugburu ákwà ga-ịgbanwee n'etiti ngosipụta na nhọrọ, mgbe na-acha ọcha rịbọn bụ nnọọ akụkụ nke prototype. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The ngwaọrụ bụ a obere nwa Puck, agwa ya okwu na ekwentị n'iji Bluetooth. Ọ straps gburugburu handlebars, na nwere a obere okirikiri e-akwụkwọ ngosi na-egosi na ntụziaka na anya ị na-aga.
Eji ya bụ ihe ndị ọzọ fun karịa a omenala n'aka-site-n'aka GPS ngwaọrụ; ha nwere ike ịbụ dịtụ nrụgide on a igwe kwụ otu ebe, na ike na-aga via karịsịa okirikiri-unsympathetic okporo ụzọ. Ha na-na banyere arụmọrụ, ọ bụghị ịgagharị.
Nanị site na-atụ gị na njedebe ikpeazụ, na Beeline enye echiche nke onwe. Ọ na-adị na; ezu nke mere na ị gaghị aga adịghị mma n'ihi na ogologo. Ọ dighi na echiche nke ụjọ mgbe ụfọdụ ị na-eche mgbe navigating site na iji a GPS igwe kwụ otu ebe na kọmputa. A n'akụkụ uru naanị na-egosi na ntụziaka bụ na ọ gējide gi re-ekere òkè na gburugburu gị, na-enye gị a dị ike n'echiche nke ebe.
Inwe Agbaghara ọtụtụ turnings na a n'aka-site-n'aka ịgba ígwè kọmputa, M nwere ike-agba akaebe na ọ dị otu ihe mgbu. Ha na-emekarị iwe oge ịmata na ị na-anya N'ezie wee arịọ gị ka recalculate ụzọ. Ozugbo ị kpebiri ime na, na ị na-emekarị Agbaghara kasị mma reroute na-eduga na a okirikiri nke ịkwụsị, echere ya ịchụkwudo, mgbe ahụ na-aga ọzọ. Ọ bụ ihere.
Obere nwa Puck
The Beeline mkpachị na na handlebars via ya mkpuchi. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
One mma akụkụ nke ngwaike bụ ogo ya (ozugbo ọ n'ụgbọ mmiri - n'oge ọ bụ a MacGyver-dị ka ihe e kere eke nke metụtara Onye Arduino na a USB batrị). Ọ bụ obere ezu iji nọ na n'akpa uwe, akpa ma ọ bụ a saddlebag. Ọ ga-enwe a na ngwaọrụ na ị ga-eleghị anya chọrọ iji n'elu gị ama maka navigation n'ihi edebe gị na ekwentị na ihuenyo on egbu ya batrị.
Attaching ya na detaching ọ dị mfe dị ka e nweghị mgbodo hapụrụ. The prototype e mere na via a stiif roba gbalaga nke ejikọrọ na Beeline ya mkpuchi. The abụọ ebipuworo n'ime onye ọ bụla ọzọ iji doo ya na handlebars. Ọ na obi OK, ma nwere ike ime na ukpụhọde dị ka ọ bụ a bit rụrụ. The mkpuchi nwere ike flipped na ihuenyo maka iga na a akpa ma ọ bụ n'akpa uwe.
The Beeline bụ ugbu a na Kickstarter maka £ 45, na-atụ anya na ụgbọ mmiri na August 2016. A ikpeazụ mkpọsa version na-atụ anya na-eri gburugburu £ 60.
O doro anya na e nwere ihe a ọdịiche nke na-abụghị GPS chụpụrụ nsochi usoro ebe ngagharị na mmata nke dị mkpa karịa ihe ndị kasị oru oma ụzọ. Ọbụna ndị nke a prototype ala, na Beeline bụ fun iji, na ahụrụ m na ọ na-erughị akpata nchekasị iji mee ihe karịa a omenala n'aka-site-n'aka usoro.
The echiche bụ ụda ndị na-agba ịnyịnya na obodo mara Olee ihe enyemaka ebe ha na-aga, ma ọ bụ chọrọ ọzọ mgbanwe na-aga. Anyị ga-ahụ ihe ngwaike anya dị ka otu ngwaọrụ ka Ẹnam ekese ke August.
Uru: obere, ìhè, mfe itinye, ihe ịnya onwe, ọ dịghị re-nsochi usoro igbu oge, ezi ndụ batrị n'ihi na nke e-akwụkwọ ihuenyo (na tiori)
Ọghọm: -achọ na-eji gị isi kama n'ajụghị ase na-eso ntụziaka, nwere ike ọ gaghị na-kacha oru oma ụzọ, -akwado ihe ọ bụla na crowdfunding ihe ize ndụ
Alastair Jardine, Nkeji edemede, Crowdfunding, Ịgba ígwè, Ngwa, GPS, Kickstarter, Life na style, Nyocha, Technology
← Apple TV review: anọ ọgbọ gụgharia igbe bụ n'ụzọ zuru ezu butere 30 Christmas onyinye echiche n'ihi na tech-savvy ụmụ →